Tanàna lalina: Ny labozia kambana, afaka mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Ny mpandrindra G5 dia nanjary mendrika ny iray amin'ny mavitrika indrindra amin'ny lalao amin'ny App Store sy ny Mac App Store, izay manolotra kilalao marobe marobe amin'ny endrika haitao an-tsary izay tsy maintsy hizahantsika toetra ny atidohantsika mba hiezaka hitady ireo zavatra miafina ary hamaritana ireo enigma sy olana samihafa hitantsika teny an-dalana. Matetika, indray mandeha isam-bolana na mihoatra, ny tovolahy avy amin'ny G5 dia manolotra anay ny iray amin'ireo lalao ilain'izy ireo maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra. Amin'ity indray mitoraka ity dia miresaka momba ny lalao isika Deep Town: Ny labozia kambana, lalao izay manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 4,99 euro ho an'ny iPhone ary 6,99 euro ho an'ny iPad.
Ny tantaran'i Jesoa dia nitranga nandritra ny fiandohan'ny taonjato, tamin'ny fotoana nandrosoana sy fanantenana lehibe. Ny injeniera tanora iray dia asaina hiasa any Deeptown amin'ny fampanantenany karama tsara. Deeptown dia miorina amin'ny fanambanin'ny ranomasina 1.800 metatra ny halaliny. Rehefa tonga any amin'ny toerana halehany fotsiny mihaona amina tovovavy iray milaza izy fa nahita vampira monina ao an-tanàna, tanàna iray izay tsy misy mponina izao. Fotoana fohy taorian'ny nanaikitry ny vampira azy ary tsapany fa karamany ra no nanakarama azy.
Mandritra ny fivoaran'ny lalao dia ho hitantsika ireo seho 37 zaraina mandritra ny fizarana 10, izay hilazantsika ny lalao kely 11 hahatratrarantsika zava-bita 20 mahafinaritra izay haintsika afaka mahita fomba hahatongavana ho tena olona indray. Nota: Raha mihazakazaka ny iOS 10 ny fitaovanao dia mety hivaingana ny lalao amin'ny efijery Go To Game. Raha izany no anao dia mandehana amin'ny famaritana ny lalao hahitanao ny vahaolana amin'ny olana.
1 Sintomy ny Deep Town: Ny labozia kambana maimaim-poana amin'ny iPhone
2 Sintomy ny Deep Town: Ny labozia kambana maimaim-poana amin'ny iPad
Sintomy ny Deep Town: Ny labozia kambana maimaim-poana amin'ny iPhone
Sintomy ny Deep Town: Ny labozia kambana maimaim-poana amin'ny iPad
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Tanàna lalina: Ny labozia kambana, afaka mandritra ny fotoana voafetra